Labada Lacagood ee ugu Quruxda badan Adduunka ayaa isku xidha Taariikhda iyo Mustaqbalka Nabadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Labada Lacagood ee ugu Quruxda badan Adduunka ayaa isku xidha Taariikhda iyo Mustaqbalka Nabadda
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Lacagaha quruxda badan ee Talyaaniga
Kooxda Mashruuca Tifaftirka oo kaashanaya machadka Siyaasadda ee Zecca dello Stato ee Rome (Maamulka Dawladda Talyaaniga) ayaa bilaabay farriin aad u wanaagsan iyada oo loo marayo farshaxanka wax-soo-saarka.
2017 ee Berlin, "70 Sanadaha Nabadda ee Yurub" oo ay soo saartay Mint State Mint ayaa lagu abaalmariyay sida lacagta ugu quruxda badan adduunka.
Waxay ahayd aqoonsiga hal-abuurka Talyaaniga iyo u-hagaajinta farshaxanimada quruxda badan iyo dhammaystirka daabacaadda iyo dhamaystirka.
Progetto Editoriale, sidaas darteed, wuxuu ku faanayaa inuu soo bandhigo taran gaar ah.
Dhalintu waxay asal ahaan ka timid waaxda gudaha ee xaradhka farshaxanka ee Istituto Poligrafico e Mint dello Stato oo lagu soo saaray daabac lambaraysan oo shahaado ah, si loo bixiyo caddayn buuxda iyo faafinta dhacdo taariikhi ah oo weyn oo aan weligeed ka dhicin gudaha Qaarad hore.
Quruxda, yaababka, taariikhda, nabadda, farshaxanka, dhaqanka - kuwani waa walxaha isku dhafan ee shirka bandhigga ee Matxafka Mint ee Rome oo ah laba billadood oo muhiimad aan caadi ahayn oo ka dhashay iskaashiga ka dhexeeya Progetto Editoriale Publishing House iyo Mint State.
Dadkii ka hadlay munaasabadda ayaa ahaa Agaasimaha Mashruuca Tafatirka, Francesco Malvasi; Eng. Matteo Taglienti, Madaxa Mint iyo wax soo saarka farshaxanka ee silsiladda sahayda ee Waaxda Horumarinta Isku-dhafka ah ee Poligrafico; Ing. Antonio Cascelli, Agaasimaha warshadda Mint ee Gobolka iyada oo loo sii marayo Gino Capponi; iyo Franco Salvatori, Guddoomiyaha Sharafta leh ee Jaaliyadda Juqraafiga Talyaaniga.
Goobtu waa meel gaar ah oo gaar ah, oo u furan dadweynaha munaasabadaha gaarka ah ee dhacdooyinka muhiimka ah. Matxafka Mint ee Rome, oo dhashay horraantii qarnigii sagaal iyo tobnaad isagoo ah Golaha Numismatic ee aasaaska lacagta papal oo loo dhiibay Boqortooyada Talyaaniga 1870, wuxuu ka kooban yahay khasnado dhab ah: qadaadiic, bilado, koofiyado, feero, moodallo wax, iyo koobiyada qadaadiic kasta oo dhawaan la soo saaray iyo bilado.
Ma aha oo kaliya, mashiinada qadiimiga ah ee biraha iyo soo saarista qadaadiicda iyo biladaha, pantographs qarnigii sagaalaad, iyo qalabka loo isticmaalo waaxaha kala duwan ee Mint Talyaani ee lagu dhisay buurta Esquiline (degmada Rome) ee 1911 ayaa halkan laga arki karaa.
Laga soo bilaabo "Lacagta ugu quruxda badan adduunka" ilaa billadda loogu talagalay Nabadda Yurub, waddo ayaa la sameeyay 2015, markii 10 euro oo loo qoondeeyay mawduuca nabadda ay ka dhalatay hal-abuurnimada Maria Carmela Colaneri, farshaxanka. Dugsiga Biladda ee IPZS (Machadka Polygraphic State Mint) intii lagu jiray dagaalkii ugu dambeeyay ee Yurub. 2017, lacagta qadaadiicda ah ayaa lagu abaalmariyay inay tahay tan ugu quruxda badan adduunka, iyada oo ku fiicnaatay soo jeedinta 40 kale oo qaran, iyo 2019, mudnaanta ayaa dib loo xaqiijiyay St. Petersburg.
Waqtigan xaadirka ah, 10ka lacagta euro-da ah meelna lagama helin, qiimihiisu suuqana si joogto ah ayuu u kordhayaa. 2020, sanadka xiisaha leh ee masiibada, Progetto Editoriale wuxuu go'aansaday heshiis wadajir ah oo lala galay IPS si uu hoosta uga xariiqo udub dhexaadka nabadda, amniga, iyo wada noolaanshaha madaniga ah iyada oo loo marayo dib u tarjumida "70 sano ee nabadda Yurub" lacagta.
Farshaxannimada farshaxanimada ee Silvia Petrassi waxay dhashay bilad cusub oo leh astaamo isku mid ah, iyada oo ujeedadu tahay kicinta waqtiyada milicsiga iyo wacyigelinta qaab-dhismeedka juqraafiyeed caalami ah oo aad muhiim u ah oo leh su'aalo badan oo mustaqbalka ah.
Shaqsigee taariikhiga ah, haddii uusan ahayn kan Frederick II ee Swabia, ayaa sida ugu wanaagsan u muujin kara qiyamka nabadda? Boqorkii Boqortooyada Roomaanka ee barakeysan, Boqorkii Sicily iyo inta badan koonfurta Talyaaniga, run ahaantii wuxuu ahaa hormood dhaqan iyo aragti fog, siyaasi caqli badan, hal abuur leh, aad u jecel suugaanta iyo fanka, ilaa uu kasbaday naanaystiisa. Stupor Mundi.
Isla magacan ayaa loo bixiyay Biladda qaab lacag ah, oo uu sameeyay Remo Carboni, waxaana curiyay Mint Talyaani ah, taasoo si wadajir ah loo guddoonsiiyay Biladda Nabadda.
Farshaxanku wuxuu si toos ah u soo jiitay dhiirigelintiisa Agoosto, qadaadiicda dahabiga ah ee qadiimiga ah ee la soo saaray 1231 oo loogu talagalay Frederick II. Aragtidu waxa ay ka muuqatay astaanta Imbaraadoor ee habkii Qaysar, oo loo caleemo saaray laurel, halka gadaalkuna uu ka muuqday gorgorkii Roomaanka oo ay ku qoran tahay FRIDERICVS.
Dib-u-tarjumida hadda jirta, sawir-gacmeedka lagu muujiyay dusha sare ayaa lagu beddelay shaabadda taariikhiga ah ee caanka ah ee madax-bannaanida, waligood looma soo saarin habkan, halka dhabarka loo soo saaray si la yaab leh sida asalka ah.
Soo bandhigida labadan billadood, haddaba, waxay ka dhigan tahay safar loo marayo taariikhda Talyaaniga iyo Yurub, oo lagu sii xoojiyay macnaha qaaliga ah ee uu bixiyo Matxafka Mint, oo ah meel hoosta ka xarriiqaysa dhaqanka qadiimiga ah ee Mint-ka Talyaanigu, oo maanta noqday mid tignoolajiyadeed. iyo model avant-garde iyadoo had iyo jeer ilaalinaysa nafteeda fanka iyo farshaxanimada.
"Marka la eego dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Bariga Dhexe, Waqooyi Bari Aasiya, Afrika, iyo Afgaanistaan, kooxdeena waxay go'aansatay inay abuurto bilad u go'an nabadda iyo qiyamka taas oo hoos timaada," ayuu yiri Francesco Malvasi, Agaasimaha Progetto Editoriale. "Waxaan ku xirnay abuurista qadaadiic mala-awaal ah, Stupor Mundi, hal farshaxan oo yar oo muhiimad weyn leh. Ballanqaadkan naqshadeynta ah ee aadka muhiimka u ah wuxuu ka dhigan yahay waxtarkayaga dhabta ah ee kuwa la aqoonsan karo, waxaan rajeyneynaa, sida tilmaamaha loogu talagalay Yurub xooggan, soo dhaweyn leh, midaysan, iyo taageerada, oo ah tixraac iyo isbarbardhigga dhammaan dalalka iyo dadyowga adduunka. "